Waxaan maanta ka qayb galay xaflada daah furka habraac-yadda iyo hagayaasha maamulka shaqaalaha dawladda. – MESAF
News & Events News Waxaan maanta ka qayb galay xaflada daah furka habraac-yadda iyo hagayaasha maamulka shaqaalaha dawladda.
Waxaan maanta ka qayb galay xaflada daah furka habraac-yadda iyo hagayaasha maamulka shaqaalaha dawladda.
Muhiimad wayn ayey qaranka ugu fadhiyaan shaqaalaha dawladu sidaas darteed tayadooduna wa mid aan meesha ka madhnayn.
Adeegaha marka aqoontiisa akhlaaqdiisa iyo xuquuqdiisa la dhamays tiro ayu waajihi kara nidaam shaqo oo si hufan u dhaca.
Run ahaantiina qaranku tacab badan ayuu gelinaya shaqaalaha dawlada iyado aanu la kaashanayno world bank dhaqaale ahaan
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqo Gelinta, Arrimaha Bulshada & Qoyska mudane Abdirashid Ibrahim Abdirahman oo ay wehelinayaan waftiga dawlada Somaliland ka socda ee booqanaya hay’adaha Farsamada Gacanta ee dalka Jarmalka ayaa kulan la qaatay Agaasimaha Shaqada & Shaqaalaha ee Wasaaradda Dhaqaalaha, Shaqada & Guryeynta ee gobolka Baden-Wurttemberg
Officials from the Ministry of Employment, Social Affairs and Family has received today a delegation from UNICEF which was led by the Country Director of Both Somaliland/Somalia for Wajaale Child Protection Desk.